Dimy ny kandidà ho ben’ny Tanàna, Antananarivo Renivohitra: Andriantsitohaina Naina atolotry ny Isika rehetra miaraka amin’i Andry Rajoelina (IRD), Randriamasinoro Tahiry Ny Rina (Tim) avy amin’ny Tiako i Madagasikara (Tim), Rakotoariso Faniry Alban kandidàn’ny Antoko politika madio (APM), ary ny tsy miankina roa: Raharimanana Elias sy Andrianjoelina Feno Harison.
Nilaza ny Rodoben’ny mpanohitra ho amin’ny demokrasia eto Madagasikara (RMDM) fa tsy manana olana amin’ny filoha mpanorina ny Tim, Ravalomanana Marc, tamin’ny tsy fiorotsahany hofidina ho ben’ny Tanàna, Antananarivo Renivohitra, araka ny fangatahan’izy ireo. Na izany aza, mila mandresy lahatra ny RMDM ny Tim, raha tianay ny hanohana ny kandidà natolony.
Nifarana ny atrikasa fiarovana ny zotram-pifidianana sy fifehezana ny fifanolanana amin’ny fifidianana, izay fifanakalozana ho amin’ny fanamafisana ny fitandroana filaminana nokarakarain’ny Centre européen d’appui électoral (Eces). Nandray anjara tamin’izany ny solontena avy amin’ny Tafika malagasy, ny zandary ary ny polisy. Eo koa ireo mpisehatra amin’ny fifidianana avy amin’ny Ceni, ny firaisamonina sivily, ny fampahalalam-baovao…